Forum serasera malagasy Mpampiasa Italiana ratsy toetra - Dinika forum.serasera.org
Mpampiasa Italiana ratsy toetra
Fitohizan'ny hafatra : Mpampiasa Italiana ratsy toetra
Annih - 18/03/2014 07:19
Miasa @ na orinasa iray miandraikitra ny fizahan-tany aty Antsiranana aho. Italiana izy ireo, fa tena devoly latsaka an-tany ry reto a sady ratsy toetra no manambany.
Roa vavy izahay no nafaran'izy ireo avy any Tanà, izaho irery fa ilay namako kosa manambady aman-janaka. Nanana ny asany ara-dalàna ny vadin'ilay namako no notambitambezan'izy ireo t@ fitaka @ resaka karama ka dia nanaiky. Niala tany izahay tsy noentohina ny indemnité de déplacement, izaho nanana famille d'accueil fa ilay namako kosa nijanona tao @ hotely izay niasan'ilay vadiny, taty aoriana kely izy ireo zay vao nanofa trano. Torak'izay iany koa ny ahy...
Efa ho roa taona latsaka izao no niasanay tato, tsy aiko oe fomba aona no hitantarako ny toetra ratsy mahazo anay ato fa le vadin'ilay namako izao dia noesorin'izy ireo t@ asany nefa tsy nahazo preavis na liquidation akory, izahay tsy déclaré ara-dalana any @ Inspection de travail. Ahenan'izy ireo ny karama misoratra ao @ fiche de paie, ovain'izy ireo ny categorie-nao( agent de reservation dia declarenzareo secretaire)= tsy tia andoha hetra sns...
Ka ny ilako hevitra @reo namana dia sao dia misy manana torohevitra @ tokony ho ataonay mba hitorianay izy ireo, resaka motif mafonja sns
Isaorana mialoha ny hevitrareo namana
essera - 10/04/2014 14:31
Ny tena tsara aloha dia aleo miala raha izaho manokana fa ny Inspection sns efa tapenan reo vola ny masony.
sahia - 04/07/2014 07:17
Marina ny an'i essera, ny lalana miverina aty Tanà asiana oul, aza mametraka demission akory fa vao maika izy ireo mila vanona anareo hoe ts maintsy manala preavis sns eo, na fitahiny am zavatr hafa eo ndray nareo. Dia ref tong aty dia mba mandalova ihany ao amin inspection Antsahavola mampahafantatra n zavamisy s manotany ny tokony atao, okay!